Ngwa gị ndị a na-emechi n'ụzọ na-enweghị isi? Anyị nwere ihe ngwọta | Gam akporosis
Ruo otu ụbọchị na ọkara ọtụtụ n'ime anyị na-ata ahụhụ nnwụchi mmechi nke ọtụtụ ngwa ahụ na anyị na-agbalị imeghe anyị mobile. Ma nke ahụ bụ ọbụna na nyiwe dị ka Chromecast na Google TV, otu ihe na-eme Ma gini na-eme? Azịza ya dị mfe, anyị ga-enye gị azịza maka ya.
Ọ bụ Anyị na-ekwu maka nke ahụ ma ọ bụrụ na ị malite Tapatalk, ọ na-emechi mgbe ị mepere ya, nke mere na ọ bụrụ na ị nwaa ịmepe ya ọzọ, ọ na-emechi ọzọ. Ọ na-eme na ọtụtụ ngwa ọdịnala na ndị ọzọ na ndị ọzọ ndị ọrụ na-izute nke a dị oké njọ nsogbu na ọ fọrọ nke nta doo anyị usoro na-abaghị uru. Luckily ngwọta bụ nnọọ mfe.
1 Otu esi edozi mmechi mmechi nke ngwa na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba
2 Nzọụkwụ mbụ ị ga-ewere: gbanyụọ mmelite na-akpaghị aka site na Storelọ Ahịa Play
3 Nzọụkwụ nke abụọ: WebView nke sistemụ gam akporo
4 Etu esi ewepu WebView site na sistemụ gam akporo na Chromecast na Google TV
Otu esi edozi mmechi mmechi nke ngwa na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba
Nke mbụ, olee otú Ọ na - eme na 80% nke ndị ọrụ gam akporo, n’ezie, emelitere ha na akpaghị aka ngwa sitere na Storelọ Ahịa Play. Na nsogbu bụ na e nwere otu na otu melite site na ụdị nsogbu nke sistemu: Android Sistemụ Webview.
Na a mbipute ohuru na - eweputa nsogbu ndi a nke enweghi mmechi nke na-ahapụ anyị ka aka anyị kegide. Ọ bụ eziokwu na Google ewepụtala mmelite nke na-edozi ya, mana ọ bụrụ na anyị enye gị ndụmọdụ ka iwepụ mmelite nke ngwa a.
Gam akporo System Webview bụ ngwa a raara nye na-enye ọ bụla ngwa ihe esịtidem nchọgharị na ọtụtụ n'ime unu ga-ama banyere Tapatalk na usoro ọzọ nke na-enye anyị ohere ịmepe njikọ URL n'ime ha.
Nzọụkwụ mbụ ị ga-ewere: gbanyụọ mmelite na-akpaghị aka site na Storelọ Ahịa Play
Ka ọ ghara imelite na-akpaghị aka ruo mgbe Google kwuru nsogbu a, anyị ga-gbanyụọ mmelite na-akpaghị aka site na Storelọ Ahịa Play:
nos anyị na-aga Ntọala si menu menu site na Storelọ Ahịa Play
Nke atọ nhọrọ "Melite ngwa na akpaghị aka", anyị pịa ya
Anyị na-ahọrọ: "Emegharịla ngwa na akpaghị aka"
Nzọụkwụ nke abụọ: WebView nke sistemụ gam akporo
Anyị ga-eme ihe iji dozie nsogbu a siri ike:
Anyị na-emeghe Playlọ Ahịa Google
Anyị na-achọ Gam akporo System WebView
Anyị na-ewepụ mmelite
Doziri nsogbu enweghị mmechi nke ngwa
Etu esi ewepu WebView site na sistemụ gam akporo na Chromecast na Google TV
Maka ndị gị na-ahụ na ụfọdụ ngwa na Chromecast na Google TV anaghị arụ ọrụ, dị ka ọ dị na ọrụ Movistar + gụgharia, anyị ga-agbaso otu ihe ngwọta ahụ, ọ bụ ezie na usoro ị ga - eme dị iche na Google TV:
Anyị na-aga Google TV Ntọala na Chromecast
Anyị na-aga Ngwa
Anyị na-ele anya na njedebe nke ndepụta «Gosi ngwa ngwa»
Ugbu a, anyị na-ele anya maka "Android System Webview"
Anyị na-ahọrọ ya ma wepu mmelite na otu bọtịnụ:
Ugbu a, i nwere ike ẹkedori ngwa ndị na-emechi na Google TV enweghị nsogbu ọ bụla na gaa n'ihu na-ele ọrụ gụgharia nke dara ada dịka Movistar +.
Ma ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na emelitela ya, ọ bụrụ na ijiji, gị anyị nwere ike ikwu na-eche ụbọchị ole na ole ruo mgbe akpaka mmelite na-arụ ọrụ ọzọ ma melite ngwa a. Onweghị ihe ga - eme n’ihi na ịnweghị ya ka emelitere rue mgbe ajọ ifufe a gafere ntakịrị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa gị ọ na-emechi n'ụzọ na-enweghị nsogbu na ekwentị mkpanaaka gị ma ọ bụ na Chromecast na Google TV? Anyị nwere ihe ngwọta